Jamaîka - Wikipedia
(tonga teto avy amin'ny Jamaika)
Teny filamatra : Out of Many One People
Teny ofisialy fiteny anglisy
Tanàna ngeza indrindra Kingston, Montego Bay
- Governoran'i Jamaika
- Praiministra Fanjakana ara-antenimiera
- Rano (%) faha 158
- hakitroka faha 135
2 804 332 mpo.
Anaran'ny mponina Jamaikana, Jamaikanina
Sandam-bola Dollar jamaikanina (JMD)
Hiram-pirenena Jamaica, Land We Love
I Jamaîka dia firenena any Antilia any andrefan' i Haity sy any atsimon' i Kioba. Ny renivohiny dia i Kingston.
Avy amin' ny fiteny araoàka dia atao hoe Xamayca (midika "tanin-kazo sy ny rano") io firenena io; ny Araoàka dia tonga tany Jamaîka tamin' ny taonjato faha-11.
I Christophe Colomb no Eorôpeanina nahita azy voalohany tamin' ny taona 1494, ary namorona ny tanàna Sevilla la Nueva (ankehitriny tenenina fotsiny hoe Seville, tanàna any andrefan' i Saint Ann's Bay eo amin' ny morontsiraka avaratra). I Colomb dia nampiasa ilay tanàna ho an' ny fianankaviany. Elaela taty aoriana, niala tao Sevilla la Nueva ny mpanjana-tany espaniôla, satria nolazainy fa tsy azo ipetrahana, nifindra toerana tany amin' ny faritra atsimon' i Jamaîka ny Espaniôla. Tany izy namorona tanàna vaovao: Santiago de la Vega (ankehitriny Spanish Town). Ny teratany araoàka dia nataon' ny Espaniôla ho mpiasany sy andevony, ary voaringana haingana ny ankabieazan' ny Araoàka tao Jamaîka. Efa tsy nisy teratany intsony tao Jamaîka tamin' ny faran' ny taonjato faha-16.
Ny amiraly anglisy Penn sy ny jeneraly Venables dia naka ilay nosy tamin' ny taona 1655 ary lasa zanatany britanika noho izany ny Jamaîka tamin' ny taona 1670, teo anelanelan' izany, ny ankabeazan' ny mpanjanatany espaniôla dia niala tao Jamaîka ary nakany Kioba, mbola espaniola. Ny amiraly Penn dia nanova ny anaran' i Santiago de la Vega ho Spanish Town.
Miteny anglisy[hanova | hanova ny fango]
Governemantan'i Jamaika Archived Febroary 20, 2009 at the Wayback Machine
Sehatry ny mpanjakavavy Elisabeth, mpanjakan'i Jamaika
Jamaica Archived Jiona 7, 2008 at the Wayback Machine from UCB Libraries GovPubs
JAMAICA VIRTUAL TOUR IN HD - many locations around the island Archived Janoary 22, 2010 at the Wayback Machine
Hita tao amin'ny "https://mg.wikipedia.org/w/index.php?title=Jamaîka&oldid=1041141"
Voaova farany tamin'ny 6 Desambra 2021 amin'ny 10:53 ity pejy ity.